Muranda Anotsvaga Shamwari ‘Nepfuma Isina Kururama’ (Ruka 16)
SHANDISA PFUMA YAKO ‘KUTSVAGA SHAMWARI’
Mufananidzo wemwanakomana akarasika wabva kutaurwa naJesu unofanira kunge waita kuti vateresi, vanyori, nevaFarisi vanga vakateerera, vaone kuti Mwari anoda kuregerera vatadzi. (Ruka 15:1-7, 11) Iye zvino mashoko aJesu anangana nevadzidzi vake. Anotaura mumwe mufananidzo wemurume akapfuma anonzwa kuti mutariri wake kana kuti munhu anotungamirira mabasa pamba pake nemabhizimisi ake, anga asingaite basa rake nemazvo.
Jesu anorondedzera kuti mutariri uyu aipomerwa kuti akanga asingabate zvinhu zvatenzi wake zvakanaka. Saka tenzi wacho anotaura kuti muranda uyu achadzingwa basa. Muranda wacho anotanga kunetseka achiti: “Ndichaitei, tenzi wangu zvaachanditorera utariri? Handina kusimba zvokukwanisa kurima, ndinonyara kupemha.” Anobva afunga zano richazomubatsira oti: “Yaa! ndaziva zvandichaita, kuti, kana ndabviswa pautariri, vanhu vandigamuchire mudzimba dzavo.” Anobva adana vaya vaiva nezvikwereti achivabvunza kuti: “Une chikwereti chakadini natenzi wangu?”—Ruka 16:3-5.
Wokutanga anopindura kuti: “Mabhati zana emafuta omuorivhi.” Aya marita angasvika 2 200 emafuta. Zvichida munhu aiva nechikwereti uyu aiva nemunda wakakura wemiorivhi kana kuti aiva mutengesi wemafuta. Mutariri uya anoti kwaari: “Tora chibvumirano chako chakanyorwa ugare pasi, ukurumidze kunyora makumi mashanu [marita 1 100].”—Ruka 16:6.
Mutariri anobva abvunza mumwe ane chikwereti kuti: “Ko iwe, une chakadini?” Anopindurwa kuti: “Makori egorosi zana.” Aya anofanira kuva makirogiramu 17 000. Mutariri anobva audza munhu uya ane chikwereti kuti: “Tora chibvumirano chako chakanyorwa, unyore makumi masere.” Izvi zvinobva zvaita kuti chikwereti chacho chidzikire nezvikamu 20 kubva muzana.—Ruka 16:7.
Mutariri uyu achiri kutungamirira bhizimisi ratenzi wake, saka achiine masimba ekudzikisa zvikwereti zvine vanhu. Paari kudzikisa mari dzakakweretwa nevanhu, ari kutsvaga shamwari dzingazomubatsira kana basa rapera.
Tenzi wacho anozonzwa nezvazvo. Kunyange zvazvo zvakaitwa nemutariri wake zvakaita kuti arasikirwe nezvinhu zvake, anomurumbidza nekuti “kunyange akanga asina kururama . . . akaita nouchenjeri hunobatsira.” Jesu anowedzera kuti: “Vanakomana vomumamiriro ezvinhu epanguva ino vakachenjera nenzira inoshanda kuchizvarwa chavo kupfuura zvakaita vanakomana vechiedza.”—Ruka 16:8.
Jesu haasi kuti zvakaitwa nemutariri uyu zvakanaka uye haasi kukurudzira vanhu kuti vaite zvechitsotsi mumabhizimisi. Saka ari kurevei? Anokurudzira vadzidzi vake kuti: “Zviitirei shamwari nepfuma isina kururama, kuti, kana iyoyo yapera, vakugamuchirei munzvimbo dzokugara dzisingaperi.” (Ruka 16:9) Pano pane chidzidzo chekugara waona zviri mberi uye kushandisa uchenjeri pakuita zvinhu. Vashumiri vaMwari, avo vari kunzi “vanakomana vechiedza,” vanofanira kushandisa pfuma yavo neuchenjeri vachifunga nezveupenyu husingaperi.
Jehovha Mwari neMwanakomana wake chete ndivo vanokwanisa kugamuchira munhu muUmambo hwekudenga kana kuti muParadhiso yepasi pano inenge iri pasi peUmambo ihwohwo. Tinofanira kuita zvose zvatinogona kuti tive shamwari dzavo kuburikidza nekushandisa pfuma yedu pakutsigira zvinhu zvine chekuita neUmambo. Kana tikadaro, tichava nechokwadi chekuti tichawana upenyu husingaperi, kunyange ndarama, sirivha, neimwe pfuma zvikaparara.
Jesu anotaurawo kuti vaya vakatendeka pakuchengeta uye kushandisa pfuma yavainayo, vachakwanisawo kuramba vakatendeka pazvinhu zvinokosha kupfuura pfuma iyoyo. Anoti: “Naizvozvo, kana musina kuva vakatendeka pamusoro pepfuma isina kururama, ndiani achakuronzesai pfuma yechokwadi [yakadai sezvinhu zvine chekuita neUmambo]?”—Ruka 16:11.
Jesu ari kuratidza vadzidzi vake kuti pane zvakawanda zvavanofanira kuita kana vachida kugamuchirwa “munzvimbo dzokugara dzisingaperi.” Munhu haagone kuva mushumiri waMwari wechokwadi uku ari muranda wepfuma isina kururama. Jesu anopedzisa nerokuti: “Hapana mushandi wepamba angava muranda wavanatenzi vaviri; nokuti, zvimwe achavenga mumwe, oda mumwe wacho, kana kuti achanamatira mumwe, ozvidza mumwe wacho. Hamungavi varanda vaMwari nevePfuma.”—Ruka 16:9, 13.
Mumufananidzo waJesu, mutariri anotsvaga sei shamwari dzinozomubatsira mune ramangwana?
“Pfuma isina kururama” chii, uye muKristu angaishandisa sei ‘kutsvaga shamwari’?
Ndiani anogona kutigamuchira “munzvimbo dzokugara dzisingaperi” kana tikava vakatendeka pakushandisa “pfuma isina kururama” yatiinayo?